Umzi mveliso wamanzi weRubber yeFluid, abaXhobisi - Abavelisi beHydney yeRubber yeFluid
Ithumbu leMichiza elinamaxabiso amahle Ityhubhu yoKwakha: I-White, Smooth Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), EPDM Ukuqiniswa: Intambo eqinileyo yokuluka ngocingo kunye ne-helix wire wire Cover irabha: I-EPDM enganyangekiyo kwimichiza, imozulu kunye neozone, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza isongelwe okanye incence. Ubushushu obusebenzayo obulungele ukusebenza: -40 ℃ ~ 120 ℃ (-72 ℉ ukuya ku-248 ℉). Into yoKhuseleko: 3: 1. Isicelo seFlexible UHMWPE umbhobho wamachiza asetyenziswa kakhulu ekufunxeni nasekukhupheleni iiasidi ezinamandla kunye nealkali kunye nazo zonke iintlobo zolwelo kushishino. I-ma ...
Ukutya ithumbu yerabha nge-FDA Certification Construction Tube: I-White, egudileyo, i-NR, i-NBR okanye i-EPDM yomgangatho wokutya werabha yomeleza: Yandisa amandla aphezulu okwenziwa kunye nocingo lwe-helix . Ubushushu: -32 ℃ ukuya ku-80 ℃ (-90 ℉ ukuya ku-176 ℉) Isicelo sokutya sombhobho oguqukayo sisetyenziswa kakhulu ekufunxeni nasekukhupheni ijusi, iwayini, uncamathisela ukutya kunye neoyile enokutyiwa njl. Iimpawu: Iimpawu zeposi ziyaguquguquka, ziyaguga -iresi ...
I-Textile eQinisekisiweyo yomoya oHamba ngoXinzelelo oluPhezulu Ithumbu nganye kuvavanywa amaxesha angama-1.5 oxinzelelo lokusebenza, umxholo werabha ophezulu ngaphandle kwerabha ebuyiselweyo. Ityhubhu yokwakha: I-NR kunye ne-SBR yokwenziwa kwerabha, umbala omnyama. Ukomeleza: uqine High textile intambo okanye umsonto ukwaluka. Cover: NR & SBR zokwenziwa irabha, umphezulu egudileyo okanye esongelwe, omnyama, omthubi, obomvu ziyafumaneka. Isicelo esisetyenziselwa ukuhambisa umoya, igesi engenayo kunye namanzi kwimigodi, ulwakhiwo, ubunjineli, ukwakha iinqanawa, imveliso yentsimbi ...
Ukutsalwa kwamanzi kunye nokukhutshwa kwethumbu iTyhubhu yoKwakha: Mnyama, igudile, i-NR, ikhomputha yerabha ye-SBR. Ukuqiniswa: Intambo eyomeleleyo yethayile kunye nocingo lwensimbi ye-helix. Cover: Black, agudileyo, ilaphu lokushicilela okanye incence, SBR yerabha ezimbaxa. Isicelo Olu hlobo lwethumbu lenzelwe ukutsala kunye nokukhupha amanzi, kunye nolwelo olungonakalisiyo olusetyenziswa kwiindawo zokwakha kunye nokukhanya kwemisebenzi yokufaka izicelo.Ideal uxinzelelo oluphezulu lwamanzi okuhambisa umbhobho wemo ...
Tank iinkuphelostencils oyile ukutsala umbhobho Construction Tube: Black, Smooth, NBR. Ukuqiniswa: Intambo eyomeleleyo yethayile kunye nocingo lwensimbi ye-helix. Cover: Mnyama / bomvu / luhlaza, umphezulu isongiwe okanye incence, imozulu kunye ozone. ukumelana, irabha yokwenziwa. Into yoKhuseleko: 3: 1. Ubushushu: -30 ℃ (-22 ℉) ukuya + 80 ℃ (+ 176 ℉) Isicelo sokufunxa kunye nokukhutshwa kweemveliso ezisekwe kwipetroleum, idizili, ipetroli, izinto zokuthambisa, ipetroli. Itstands vacuum, anti-static electrical, with copper wire.Tank Truck Oil hose has designed for tank tanke ...
IHydraulic yeoyile yombhobho wokwakha iTyhubhu: Mnyama, Smooth NBR + SBR Ukomeleza: Intambo eyomeleleyo yethayile kunye nocingo lwensimbi ye-helix. Cover: Mnyama / bomvu / luhlaza, umphezulu isongiwe okanye incence, imozulu kunye ozone. ukumelana, irabha yokwenziwa. Into yoKhuseleko: 3: 1. Ubushushu: -20 ℃ (-4 ℉) ukuya kwi-80 ℃ (+ 176 ℉) Isicelo esisetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zoomatshini bokubamba amanzi, ukubuyisela imibhobho, izithuthi zobunjineli, njl., Umxholo wehydrocarbon onqabileyo awugqithi kwi-20%. Iimpawu zemozulu kunye nesembozo esinganyangekiyo. Zombini sm ...
Isirhubuluzi esomeleleyo sesablast ithumbu Tube: Mnyama, egudileyo, NR zokwenziwa irabha yomeleza: Phindaphinda amandla aphezulu amalaphu okwenziwa.Umnyama, ubhetyebhetye (usongelwe), irabrikhi enganyangekiyo yeNR yokwenziwa kwerabha yesicelo. , Ubushushu besicelo sokuqhumisa Ubushushu: -20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Iimpawu: Ithumbu lethu leSandblast yenzelwe ukusetyenziswa kwesanti jikelele. Yenzelwe ukuhanjiswa kwesantya esiphezulu kwesanti, ifoto yentsimbi, i ...
Ukuphathwa Umbhobho Wempahla
Ukunxiba okuphezulu kokuphatha izinto ngombhobho ithumbu: Mnyama, gudile, NR + BR irabha yokwenziwa. Ukuqiniswa: Intambo yokwaleka ephezulu yethayile okanye intambo yethayile eqinileyo ephezulu kunye nocingo lwensimbi ye-helix. Uqweqwe: Umnyama, ugudile (usongelwe) okanye uthambile, irabriki enganyangekiyo yeNR yokwenziwa kwerabha. Ubushushu: -20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Isicelo sokuthintela ityhubhu enganyangekiyo kunye nesembozo esenziwe ngezinto eziphezulu. Isetyenziselwe ukuhambisa izinto ezomileyo kunye ne-slurry kwaye ilungele isamente eyomileyo, ilitye lengqalutye kunye nokunye okurhabaxa kwam ...
Ukunxiba okuphezulu kwesamente eyomileyo ithumbu lokwakha iTyhubhu: irabha yokwenziwa, nxiba ukumelana nefuthe elinganyangekiyo (i-NR + BR). Umaleko wokomeleza: Umgangatho ophezulu wethayile eyolukiweyo yerabha: I-NR + SBR into yoKhuseleko: 3: 1 Iqondo lobushushu elisebenzayo: -20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Isicelo: Ityhubhu enganyangekiyo ye-Abrasion kunye nesimbozo esenziwe ngezinto eziphezulu. Isetyenziswe kugqithiso lwezinto ezomileyo kunye neslryry kwaye zilungele isamente eyomileyo, ilitye lengqalutye kunye neminye imithombo yeendaba esirhabaxa. Iimpawu irabha yangaphakathi w w phezulu ...
Ityhubhu yokwakha: I-NR kunye ne-SBR yokwenziwa kwerabha, umbala omnyama. Ukuqinisa: Intambo eyomeleleyo yethayile. Cover: NR & SBR zokwenziwa irabha, umphezulu egudileyo okanye esongelwe, omnyama, omthubi, obomvu ziyafumaneka. Ukusebenza kweqondo lobushushu: -20 ° C -80 ° C Inzuzo 1. Ukumelana nokukrwada, ukubola, ubushushu kunye nokuguga Ubunzima, bomelele, bomelele kwaye bude ubomi benkonzo. I-2 rolls flat yindawo elula yokuhamba, ukubuyisa kunye nokuphatha. 3. Ubunzima bobunzima, obomeleleyo, obomeleleyo kunye nobude benkonzo. 4.Easy ukwandisa ukuba ubude kunye coupl ithumbu ...
Umphunga namanzi ashushu wombhobho
Umphunga kunye nethumbu lamanzi ashushu Ukwakha iTyhubhu: Mnyama, igudile, Ukumelana nobushushu obuphezulu buzele irabha ye-EPDM yokwenziwa kwerabha. Umaleko wokomeleza: Umtya oqinileyo wempahla eyolukiweyo yokhuseleko: 4: 1 Ikhava: Mnyama / mhlophe / luhlaza / luhlaza, tyaba (ugqibe ukusongela) irabha ye-EPDM eyenziweyo. Ubushushu obuphezulu, imozulu kunye neozone resistant.working temperature: -40 ℃ (-40 ℉) ukuya + 150 ℃ (+ 302 ℉) Isicelo: Umphunga namanzi ashushu afanelekileyo kwizicelo ezininzi kwishishini leemoto, izixhobo zokucoca, iinkqubo zokupholisa, iCoolin ...